Baby Door Incoko, Baby loKhuseleko Tshixa, Baby Safety Kitchen - Oicozy
Baby Safety Door isivalo
Sicinga imveliso ezilungileyo kuyilo elungileyo kunye nolawulo okulungileyo, nto ke leyo ebangele sisoloko sibeke umgangatho kwindawo yokuqala ngqongqo liliso umgangatho imveliso le yonke inkqubo.
Ukutshintsha ukusuka OEM ukuya ODM, elingumthombo silwela kuyilo kwaye lophawu uqobo, ezenza sibe noxanduva iimveliso zethu nabathengi term elide.
Oicozy, nkampani Ningbo Oboun, yenye yee-ubungakanani kumenzi oko ekuyileni ikakhulu ukunika nesango nokhuseleko umntwana ekhaya nezinye izinto zokhuseleko ezifana nezitshixo kunye latches, njl
Yasekwa ngo-2015, ngoku Ningbo Oicozy uba ukuba umthengisi eyodwa enye kumazwe ikakhulu ukujongana uyilo, lorhwebo kunye nemveliso izinto ukhuseleko baby, umzekelo ucango lokumisa, kwikona umkhuseli, yokutshixa ukhuseleko, kunye nesango ukhuselo njalo njalo.
Siya ise Ningbo, China kunye ukufikelela zokuhamba lula yaye zonke iimveliso zethu ukuthobela nemigangatho kwemigangatho amazwe ngamazwe ezaziwayo kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kulo lonke ihlabathi. Ziyahlangana indawo ye square metres zocweyo 2000, ngoku kufuneka abasebenzi phezu 80, i-nani intengiso ngonyaka engaphezu USD3, 000.000 yaye njengangoku uku rhweba 90% yemveliso yethu ehlabathini lonke ...